D I M D I M O O —-KITAABA HAARAA—Beekan Gulummaa Irranaatiin… -
bilisummaa July 13, 2015	2 Comments
Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa’ama. Anis kanuma ka’umsa godhachuun waan jiruufi jireenyaa..akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra kaa’amee dhalootaaf darba kan jedhun qaba…..
Coomaafi dilbii aadaa keenya keessa jiran hammaaranii fixuun waggoota hedduu namatti fudhatus, kunoo Yunivarsiitii biyya keessaa garaagaraa keessatti yeroo shaman tokko waraqaan dhiyeessaa ture gara Afaan Oromootti fideen qorattootaaf akka tolutti fuula 145 kan taatu walitti qabeen bifa kitaabaabaan siniif dhiyeesseen jira. Warreen hojii kana tolayyuu naharkaa fudhattanii maxxanfattaniif galata guddaa isiniif galchaati dubbistoonni kitaaba kanaa qabiyyeessaafi miidhagina hojiichaatti akka gammaddan abdiin qaba. Qabiyyeewwan kitaabichaa kunooti…
Uummanni Oromoo aadaa akka yaa’aa ciisa galaanaa qaba. Aadaansaa kun ammoo bara dheeraatiif hacuuccaa jabaa keessa ture. Yeroo itti amma ija saaqqatee ilaaluu jalqabe kanatti ammoo qorannoofi qo’annootu isa dandamatee jira.
Nuti falaasama aadaafi duudhaa keenya keessa jiru qorannee hinbaafnu taanaan ormi dhufee nuuf qoratu hinjiru. Sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija buruqsaa’ jedhu mitiiree?. Yeroon ammaa kun yeroo kamirrayyuu yeroo itti hirriba keessaa kaanee dhimmoota eenyummaa keenyaa faana kan walqabatu itti qorannudha. Dabalataanis, waa’een sirna gadaa keenyaa hangi tokko ilaalamaniiru. Caaculeen aadaa keessa jiran tokko tokkos barreeffamaniiru.
Kitaaba kana keessatti yaadrimeewwan ka’an qorattootaaf akka ka’umsa ta’uuf malee gadi fageenyaan qorannoo jabaan irratti hintaasifamne. Haata’u malee, warri saba kana keessaa baanee baranneerra jennu martuu gadi fageenyaan dhimmoota waa’ee keenya kana ilaallatanirratti hojjechuun dirqama seenaa ta’a.
Kitaaba kanaafis maqaan ’DIMDIMOO’jedhamu kan kennameefis aadaan baataa waan hundaa ta’uusaa ittiin mirkaneessuufidha. Aaadaan uummata Oromoo beekumsa uummata Oromoo baatee labata aanuuf dabarsa. Manni keenya akka hinraafamneef, dimdimoon mana keenyaa jajjabeeffamuu qaba. Qorattoonni dhimma, aadaa, afoolaafi seenaarratti hojii keessan hojjetaa jirtaniifi warreen aadaa keessan leellistan hojii kanatti akka gammaddan abdiin qaba.
Akaakuuwwan Aadaa —————————————————–5
Moggaasa Maqaa/ Hammachiisaa—————————————-5
Aadaa Guddifannaa ——————————————————–6
Aadaa Uffata Oromoo—————————————————-11
Meeshaalee Aadaa Muuziqaa ——————————————-15
Nyaata Aadaa Oromoo—————————————————18
Buna Qalaa (Kila Qalaa)————————————————-18
Dhugaatii Aadaa Oromoo————————————————27
Meeshaalee Ulfoo Oromoo———————————————-32
Qorxiifi Sabaroo ———————————————————-35
Aadaa Waliin Jireenyaa————————————————–36
Afoola Uummata Oromoo———————————————–41
Akaakuu Afoolaa ———————————————————42
Akaakuu Tapha Ijoollee ————————————————-46
Been Laga Boqqoolloo Buunaa—————————————–49
Yaa Jalduu Biiree———————————————————51
Tapha Qillee ————————————————————–57
Faaruu Loonii ————————————————————-65
Sirna Gadaa Uummata Oromoo—————————————–65
Dameewwan (Jaarmiyaawwan) Sirna Gadaa————————-68
Sirnootafi Ayyaana Sirna Gadaa Keessatti Ayyaaneeffataman—–71
Ayyaana Baalii (Ayyaana Aangoo Walitti Dabarsuu)————– 71
Ayyaana Caam-Baateefi Gorsaa—————————————71
Ayyana Gumii/Walgayii Ykn Yaa’a Uummataa ———————71
Ayyaana Muudaa (Jila)—————————————————72
Ayyaana Irreecha (Thanksgiving Day)——————————–73
Ayyaana Ateetee (Ayyaana Facaasaa)———————————73
Maallattoo Sirna Gadaafi Waaqeffanaa——————————–73
Alaabaa (Flag) Saba Oromoo ——————————————-74
Asxaa Saba Oromoo——————————————————75
Jaarmiyaalee Araaraafi Meeshalee Ulfaa Gurguddoo—————-75
Abbaa Muudaa (Qaalluu/ warra Ayyantuu)—————————76
Sirni gadaa akkamitti hojjeta?——————————————-77
Gumii ykn Yaa’ii (Kora uummataa)————————————78
Abbaa Bokkuu (Mootii)fi Hojjaasaa ———————————–78
Qaalluu (Ayyaantuu ykn dursaa Amantii)fi Hojjaasa—————-78
Abbootii Gadaa Oromoo————————————————-79
Hojjaa Ciccimoo Bulchiinsi Gadaa Irratti Xiyyeeffatu————–79
Seera Gadaa Oromoo Eenyutu Tuma?———————————80
Seeri Gadaa maal maal of keessaa qaba? —————————–80
Dhimma Gumaa Hiikuu (Araara Buusuu) —————————-84
Dimokiraasummaa Sirna Gadaa—————————————-90
Imaammata Walii-Galtee Qadaaduu ———————————–93
Rakkoo Addaan Citiinsa Aangoo Hambisuu Mala ——————93
Umuriifi Dhalootaan Aangoo Qooduu———————————94
Sirni Gadaa Eessattiifi Yoom Hojii Jalqabe?————————-99
Ayyaanota Bebbeekamoo Oromoo————————————102
Wadaajo / Wadaaja——————————————————103
Ayyaana Irreecha Malkaafi Tulluu————————————103
Taaboree/ Ukee ———————————————————103
Qoricha/Dawaa/ Aadaa ————————————————110
Seenaa Qoricha Aadaa————————————————–111
Faayidaa Qoricha Aadaa————————————————117
Qorichi Aadaa Sa’aatii Akkamii Qophaa’aa? ———————–119
Qoricha Aadaa Eenyutu Qopheessa? ———————————122
Haala Kenniinsa Qoricha Aadaa————————————–125
Qorichi Aadaafi Dhukkuboota Inni Fayyisu ————————129
Mana Raabsaa kitaabaa kamirraayyuu ni argattu
Tags Asoosama beekan guulamaa dimdimoo kitaaba
Previous Baqattoonni Oromoo keeniyaa jiraatan basaastoota mootummaa dura dhaabbachuuf murteeffatan.
Next Aliyyii Saabiti Sirbarraa gara da’awaa deebi’e jedhu
Dr. Jirta kitaaba kee haaraa na ergi. Nagaa Waaqayyoo waliin
Tadele Sh Geresu
Kitaaba kana argadhuu naan danda’aa lataa?